» “म त फेरि केपी ओलीको पुनरावृत्ति, हुने देख्छु : डा. केसी” “म त फेरि केपी ओलीको पुनरावृत्ति, हुने देख्छु : डा. केसी” – हाम्रो खबर
“काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले सत्ता गठबन्धनको कार्यशैली हेर्दा फेरि केपी शर्मा ओलीको पुनरावृत्ति हुने आफूले देखेको बताएका छन् ।
“देउवा सरकारले सय दिन पूरा गरेको उपलक्ष्यमा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धनको कार्यशैली हेर्दा ओलीको पुनरावृत्ति हुने संकेत देखिएको बताए ।”
“उनले भने,‘म त गठबन्धनको कार्यशैली हेर्दा फेरि केपी ओलीको पूनरावृत्ति हुने देख्छु । अबको निर्वाचनपछि सरकार हाक्ने पालो कांग्रेसको थियो । अहिले त कस्तो भयो भने प्रतिपक्षीमा बस्ने सत्तामा गयो । सत्तामा बस्ने प्रतिपक्षमा गयो ।’
“पछिल्लो समय मुलुकमा जेठान काण्ड भएको उल्लेख गर्दै फेरि सम्धी काण्ड हुन लागेको सुनाए । उनले देश बनाउको लागि र विधिमा हिँडाउनको लागि लोकतन्त्रको चुरो समात्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘लोकतन्त्रको चूरो कुरा भनेको योग्यताक्रम, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ ।”
“मिनिमम कुरामा मतएकता चाहिन्छ। सामाजिक सद्भाव र सुशासनमा मत एकता हुनुपर्छ ।’प्रमुख राजनीतिक दल र यसका शीर्ष नेताहरु लोकतन्त्रको आचरणअनुसार चल्न नसकेको पनि उनले टिप्पणी गरेका छन् ।”
“उनले लोकतन्त्र बलियो बनाउनको लागि योग्यताक्रम, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थान, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । तर, नेपालमा पछिल्लो समय योग्यताभन्दापनि आफ्नो मान्छे भर्ती गर्ने, नियुक्ती गर्ने परिपाटी देखिएको भन्दै उनले गुनासो पोखे ।”
“डा. केसीले नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले युवाहरुको पार्टीमा पकड नहुनु समस्या हो भनेर गरेको टिप्पणीप्रति असहमति जनाउँदै त्यसो हो भने कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा सबै युवा मिलेर एक जनालाई सभापति बनाए भयो नि भन्ने सुझाव पनि दिए ।”
“उनले यो सरकारको बढिमा कार्यकाल १३ महिना भएको बताए । तर, यसअघि राजदूत बनाएर पठाएकाहरुलाई धमाधम फिर्ता बोलाउने काम गरिएको भन्दै उनले यसरी कसरी राम्रो सन्देश जान्छ त ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।”
“अहिले संघीयता महंगो भएको भनेर जनगुनासो आएको पनि उनले स्मरण गराए । उनले भने,‘हामीले प्रणालीको लागि लडेको ७१ वर्ष भयो, तर के भयो त ? हेर्नुहोस त नेकपाले बहुमत पायो, तर बहुमत कसले भाँडयो ? नेपाली जनताले त होईन नि । लोकतन्त्र भन्दैमा कहाँ नाङ्गै नाच्न पाईन्छ ?’ अहिले मुलुकमा १७ खर्बको ऋण रहेको पनि उनले तथ्यांक सुनाए ।”
“उनले भने,‘हामीसँग साँढे १६ खर्बका बजेट छ । ११ खर्बको त व्यापार घाटा छ । ६ खर्बको बेरुजु छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अघि बढ्न सक्छौं त ? आजको प्रश्न त यो हो नि । सरकारी तथ्यांकअनुसार ५२ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । यो सरकारी आँकडा हो, मलाई एक करोडको हाराहारीमा होलान जस्तो लाग्छ । मुलुकलाई वैदेशिक ऋणको दुश्चक्रमा राख्नुहुँदैन् ।”
“उनले अहिले सिंगो अदालतमाथि प्रश्न उठेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘जेठानमन्त्री बने, पछि राजीनामा दिए । अब सम्धीलाई राजदूत बनाउने कुरा हुँदैछ ।’ उनले सांसद, पार्टी पदाधिकारी, मन्त्री, तथा प्रधानमन्त्री दुई चोटी मात्रै हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसको लागि नेताहरुले पहल लिनुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘तपाईँहरु यसको लागि लड्नुहोस ।’ उनले अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको ग्राफ माथि जाने पनि विश्लेषण गरे ।”
“उनले भने,‘ओलीको कहर मुलुकले अर्को दश वर्ष धान्ने म देख्दैछु ।’ उनले समग्र पार्टीमा युवा पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्ने पनि बताए र यसको लागि युवाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।”